बिजेताको टाउकोबाट ज’ब’र’जस्ती ताज खोसेपछी यस्तो ह’ङ्गामा ! मिसेज श्रीलङ्का घा’इते,भिडियो।:: Mero Desh
बिजेताको टाउकोबाट ज’ब’र’जस्ती ताज खोसेपछी यस्तो ह’ङ्गामा ! मिसेज श्रीलङ्का घा’इते,भिडियो।
Published on: २८ चैत्र २०७७, शनिबार २०:२६
‘मिसेज वर्ल्ड पक्राउश्रीलङ्कामा सौन्दर्य प्रतियो गिता का बेला बिजेताको विषयमा भएको विवाद मा कोलोम्बो प्रहरीले वर्तमान मिसेज वर्ल्डलाई प’क्राउ गरेको छ । मिसे ज वर्ल्ड क्यारोलिन जुरी माथि उनले बिजेताको टाउकोबाट जबरजस्ती ताज निकाल्ने कोसिस गरेको जसका कारण मिसेज श्रीलङ्काको टाउकोमा गम्भीर चो’ट लागेको आ’रो प लागेको छ ।
‘स्मरण रहोस्, आइतबार भएको प्रतियोगितामा क्यारोलिन जुरीले मिसेज श्रीलङ्का छानेपछि पुष्पिका डी सिल्वाको टाउकोबाट बिजेताको ताजमाथि झम्टेर निकाल्ने कोसिस गरेकी थिइन् । जुरी अघिल्लो वर्षकी मिसेज श्रीलङ्का पनि हुन् ।
‘ताज खोसिने क्रममा पुष्पिका डी सिल्वा उपचार का लागि अस्पताल भर्ना हुनुपरेको थियो । यो सौन्दर्य प्रति”योगिता को प्रत्यक्ष प्रसारण गरिँदै थियो । हलमा उपस्थित सबै दर्श क यो घटना देखेर चकित परेका थिए । प्रहरीले जुरीका साथै उनकी एक साथीलाई पनि पक्राउ गरेको छ ।
‘यसअघि डी सिल्वाले प्रहरी स्टेशनबाहिर स्था नीय संवा ददातासँग यदि जुरी सार्वजनिक रुपमा उनीसँग माफी माग्छिन् भने उनले आफूले लगाए को सबै आरोप फिर्ता लिने बताएकी थिइन् । यद्यपि, जुरीले यस्तो गर्न अस्वीकार गरिन् । डी सिल्वाले आफूले मा’फी गर्न सक्ने तर यो घ’ट’ नालाई कहिले पनि बिर्सन नसक्ने बताएकी छिन् ।
एफपी न्यूज एजेन्सीका अनुसार यो मामिलामा अर्को सुनुवाई अर्को हप्ता हुने आशा गरिएको छ । यस्तै जुरी लाई हाल धरौटीमा रिहा गरिएको छ ।
के थियो वि’वाद ?
मिसेज श्रीलङ्काको बिजेताको नामको घोषणा पछि जुरी अचानक स्टेजमा आएर सबैको अगा डि डी सिल्वा को सम्बन्धविच्छेद भइसकेको र नियम अनुसार उनी यो ताजको हकदार नभए को बताउँछिन् ।
‘जुरीका अनुसार डी सिल्वा एक सम्बन्धविच्छेद भइसके की महिला हुन् र उनलाई गलत तरिका ले बिजेता बना इएको छ । उनले दर्शकलाई यो सौन्दर्य प्रतियोगितामा सम्बन्धविच्छेद भइसके का महिलाले भाग लिन नसक्ने बताइन् । जु।रीले डी सिल्वाको टा’उकोबाट बिजेताको ताज निकालिन् र रनर–अपलाई लगाइदिइन् । त्यसपछि डी सिल्वा रुँदै स्टेजबाट तल झरिन् ।
‘यस्तै, यो घ’टनापछि सिल्वाले स्पष्टिकरण दिँदै आफू श्रीमानसँग अलग त बस्ने तर आफ्नो सम्बन्धविच्छेद भइसकेको बताइन् । कानूनी रुपमा उनी अहिले पनि विवाहित छिन् । यो सौन्दर्य प्रतियोगिताका आयोजक ले पनि स्टेज, लुगा इत्यादिमा क्षती पुर्याएको र कार्यक्रम लाई बदनाम गरेको भन्दै जुरीसँग क्षतीपूर्ती माग गरेका छन् । एजेन्सी